Lammaanaha lacagta waaweyn. Qeybta 2: Aasiya | vfxAlert official blog
Lammaanaha lacagta waaweyn. Qeybta 2: Aasiya
Akhri qaybta koowaad ee sida calaamadaha ay ugu shaqeeyaan ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saabsan lacagaha Yurub. Midda labaad, waxaan ku kordhin doonnaa faa'iidooyinka hantida sarrifka lacagaha qalaad ee Aasiya.
Labada lacagood ee ugu muhiimsan gobolka Aasiya ee softiweerka barnaamijka binary . Celcelis ahaan, waxay qaadataa 14% ee wareejinta maalinlaha ah ee suuqa Forex.
Haddii aadan xisaabta ku darsan Eurozone, GDP-ga Japan wuxuu ku jiraa kaalinta 3-aad ka dib Mareykanka iyo Shiinaha. La'aanta kheyraadka dabiiciga ah ayaa ka dhigeysa dalka mid ku tiirsan waxyaabaha ay soo dhoofsadaan, gaar ahaan saliida - hoos u dhac ama kor u kac ku yimaada qiimaheeda waxay sababtaa falcelin u dhiganta yen.
Warar muhiim ah iyo tirakoob ayaa laga heli karaa kalandarka dhaqaale ee dhammaan ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh leh , laakiin dhaqdhaqaaqa dhabta ah ee xoogga leh waxaa sababa laba arrimood:
Falalka Bangiga Dhexe - khudbadaha saraakiisha sarsare iyo faragelinta lacagaha. Ku tiirsanaanta badeecadaha la soo dejiyo waxay ka dhigeysaa xoojinta xad dhaafka ah ee labada lamaane mid aan loo baahnayn, sidaas darteed Bangiga Dhexe wuxuu si joogto ah u farageliyaa xaaladda Forex si uu u ilaaliyo sicirka sarrifka ee ku jira xadka la aqbali karo. Markii ugu dambeysay ee waxqabadyada waa weyn la arkay wax ka badan 3 sano ka hor, laakiin dareen-celinta xilliyada aan la fahmi karin ee fadhiga Aasiya waxay soo jeedinayaan in cirbadaha yaryar la sii wado!
Isbeddel ku saabsan tusmada saamiga ee Nikkei 225. Qayb ka mid ah saamiyada Bangiga Dhexe waxaa looga ganacsadaa sarrifka saamiyada Tokyo, oo si toos ah u saameeya siyaasadda lacagta. Intaa waxaa dheer, Bangigu wuxuu sameeyaa dhaqdhaqaaqyo is-weydaarsi madax-bannaan isaga oo dhigaya dawladda oo iibsanaya dammaanad gaar ah.
Falanqaynta farsamada iyo istaraatiijiyada ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah
Waxaa loo arkaa inay adag tahay in la falanqeeyo yen, laakiin qaababka ugu muhiimsan ayaa kaliya ka "gaabiya" marka loo eego noocyada kale ee lacagaha waaweyn, oo lagu daray astaamo kooban:
Celceliska isbeddelka maalinlaha waa 90 pips. Waqtiga ugu firfircoon maalinta gudaheeda waa furitaanka Suuqa Suuqa London, toddobaadku waa Arbaco;
Inta badan qaababka laambadda ayaa si liidata ugu shaqeeya jadwalka waqtiga ee ka hooseeya maalinlaha. Xaaladda kiisaska sicirka ayaa ka soo horjeedda: waad ka ganacsan kartaa xilliyada gaagaaban (oo aan ka hooseyn M15) sida ku cad jaantuska.
Xiriirka ugu weyn ee ka dhexeeya Nikkei 225, oo had iyo jeer lagu falanqeeyo istiraatiijiyado dhexdhexaad ah iyo waqti dheer ah. Waxaa sidoo kale jira iskudhac dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa American S & P500, laakiin tani waxay kaliya muhiim tahay haddii heshiisyadu ay soconayaan in kabadan hal bil.
Waxay ku nooshahay 6% isbeddelka maalinlaha ah ee suuqa Forex.
Waxaa la rumeysan yahay in aasaaska dhaqaalaha Australia uu yahay macdanta (Dahab, dheeman, yuraaniyam, bacriminta macdanta, iyo dhuxusha) sidaa darteedna, ku tiirsanaanta isbeddelada qiimaha adduunka ee hantidan waa mid weyn. Laakiin, 5tii sano ee la soo dhaafay, waaxda badeecaduhu way luntay oo in ka badan 60% ee GDP-ga ayaa ku jira qaybta adeegyada, oo ay ku jiraan dhoofinta.
Iyada oo ay taasi jirto, ayaa haddana qeybta walxaha ceyriinka ay sii waddo saameynta heerka sarrifka; inta badan istaraatiijiyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikiyaa Leh (Istaraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar qiimaha labada lamaane AUD / USD)
Warka ugu weyni waa isbeddelka heerka keydka ee Bankiga Dhexe ee Australia. Waqtigan xaadirka ah, waxay u dhigantaa 1.5%, taas oo ka dhigaysa waddanka bartilmaameed soo jiidasho leh oo maalgashi shisheeye ah, ugu horreyn qaybaha aan la xiriirin wax soo saarka.
Sicirka jaban kuu oggolaan maayo inaad ku kasbato istiraatiijiyadda "Qaad Ganacsiga." Dullaaliinta badankood waxay leeyihiin labo boos oo dhaadheer iyo kuwa gaaban, siday u kala horreeyaan, oo ah + 0,5 / -0,5%, taasoo hoos u dhigaysa macaashka.
Marka lagu daro AUD, waxaan la socdaa wararka ku saabsan doolarka, dahabka iyo xigashooyinka Suuqa Ganacsi ee Shanghai. Waxaa jira falcelin yar oo ku saabsan dhacdooyinka aasaasiga ah ee doolarka iyo pound.
Falanqaynta iyo istaraatiijiyadaha farsamada
Qiyaasta ugu sareysa iyo isbedelka labadan (isku celcelis ahaan 70-80 inta lagu jiro maalintii) ayaa lagu arkaa furitaanka kalfadhiga Yurub, oo ah fadhiga London, iyo 3 saacadood ee kulanka Mareykanka markay isdhaafsadaan. Kadib waxaa jira hoos udhac kuyimid calaamadaha ganacsiga tooska ah ee loo yaqaan ' s' , iyo wareegyada muddada-gaaban ee wararka adag ayaa suurtagal ka ah fadhiga Aasiya.
Waxaa ugufiican in diirada la saaro istaraatijiyadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Sida aad sawirka ka aragtay, dhaqdhaqaaqa ku saabsan EUR / USD waa la soo celiyaa, laakiin in ka badan oo aan lahayn ficillo fiiqan, oo u fiican bilowga. Haddii aad isticmaasho falanqaynta lacagaha badan ama lataliye otomatik ah oo aan ahayn Euro, raac USD / CAD, AUD / CAD iyo USD / JPY.
Tusaalooyinka istaraatiijiyadaha bixiyaha calaamadaha binary ee ugu wanaagsan :
Xeeladaha VfxAlert ee bilowga ah;
Qaababka Doji iyo Burburinta: istiraatiijiyad aan tilmaam ahayn oo loogu talagalay ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ;
Waa mid ka mid ah saddexda lamaane ee ugu waaweyn Aasiya oo leh 9% mugga suuqa.
Qeybta beeraha ayaa ka dhigan in ka badan 50% wax soo saarka New Zealand. Waxa kale oo jira keyd lacag ah, ilo tamar oo u gaar ah oo ku saabsan 15% wadarta baahida, inta soo hartay waa la soo dejiyaa, taas oo ka dhigaysa heerka sarrifku inuu ku tiirsan yahay qiimaha adduunka. Waxaa sidoo kale jira waax dalxiis oo horumarsan, taas oo wax ku kordhineysa waxsoosaarka guud.
Baahida loo qabo in la falanqeeyo suuqyada la xidhiidha Forex ayaa badiyaa lagu buunbuuniyaa hagaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah . Tani waa habka qaldan: deggenaansho, inta badan isbeddellada, iyada oo aan la soo qaadin soo noqnoqoshada, dhaqdhaqaaqa ayaa ku habboon ganacsatada cusub!
Xogta dhaqaala-dhaqaaleedka ayaa si dhif ah loo daabacaa, taas oo fududeyneysa falanqaynta. Laakiin waxaad ubaahantahay inaad ganacsato, sidaas darteed ciyaartoy waaweyni waxay bilaabi karaan inay kahadlaan dhacdooyinka yar yar, marka ma raaceyno warbaahinta iyo goobaha rasmiga ah:
Sida dhammaan lacagaha lammaanaha waaweyn, NZD waxay si aad ah ugu jawaab celineysaa hadalka madaxa Bangiga Dhexe. Laakiin xitaa halkan, sida caadiga ah, xawaaraha kama badna 50-70 dhibcood.
Xogta Mareykanka (sida lacagaha kale ee Aasiya) saameyn ayey ku leeyihiin, laakiin xoogga calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ugu sarreeya ayaa ka yaraan doona Yen iyo Australian dollar.
Shayga dhoofinta ugu weyni waa waxyaabaha caanaha laga sameeyo, oo qiimahoodu ku samaysan yahay xaraashka caalamiga ah ee Caanaha Caalamiga ah. Xogta waxaa la sii daayaa 2-dii toddobaadba mar, taas oo siinaysa fal-celin dib-u-dhac ah oo labada lamaane ah;
Cunsurka aasaasiga ah ee muhiimka ah ayaa ah Tusaha Baadhista Badeecadda (CRB Index) oo sicir barar u qaada badeecadaha kale ee la dhoofiyo (hilibka, dharka, alwaax, iwm). Kordhinta tusmada waa koritaanka NZD / USD.
Falanqaynta farsamada iyo calaamadaha binary
Habka ugu weyn ee looga ganacsado NZD / USD waa istiraatiijiyado isbeddel leh oo leh khataro dhexdhexaad ah. In kasta oo ay jiraan saameyn xoog leh oo isirrada aasaasiga ah, haddana waa suurtagal in laga shaqeeyo kaliya tilmaamayaasha farsamada inta lagu jiro xilliyada aan mala-awaal jirin.
Tilmaamo dheeri ah oo labada lamaane ah:
Xasiloonida xasilloonida 40-80 dhibcood ayaa la hayaa maalintii oo dhan, wadarta isbeddelku marar dhif ah ayuu ka badan yahay 100 dhibcood;
In kabadan 50% dhamaan howlaha ganacsi ee NZD waxay ku xisaabtamaan mustaqbalka badeecadaha, xulashooyinka iyo qandaraasyada CFD. Sidaa darteed, taariikhaha dhicitaanka iyo xiritaanka muddooyinka warbixineed (bil, rubuc, sannadka) waxaa jiri kara niyad-jab fiiqan oo gaara 120-150 dhibcood;
Falcelin xoog leh oo badanaa leh «farqiga» sii deynta tirakoobka qaranka waxaa la arkaa oo keliya haddii uu jiro kala duwanaansho xooggan oo u dhexeeya xogta dhabta ah iyo saadaasha. Haddii farqiga u yar yahay, waxaa laga yaabaa inaysan jirin wax isbeddel ah gabi ahaanba.
Marka lagu daro tan kor ku xusan, falanqeeyayaal badan ayaa tixraaca labada lamaane ee lacagta ugu weyn u leh Shiinaha Yuan, ama halkii ay u gudbin lahaayeen labada lamaane ee USD / CHN, oo ah "nooca" loogu talagalay ka ganacsiga dalka dibaddiisa. Ku dhowaad dhammaan dilaaliinta ayaa marin u leh hantidan, oo xaddigeedu ku dhow yahay heerka rasmiga ah waxaana loo isticmaali karaa in lagu falanqeeyo xaaladda guud ee sida ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ahi u muujiyaan suuqa Forex, gaar ahaan inta lagu jiro kalfadhiga Aasiya.